Soo saaraha bandhiga LED - JYLED
Shaashada Shaashadda LED-ka ee kirada ah
Muuqaalka Ijaarka ee LED-ka ee dibadda
Shaashada LED-ka ee Garoonka
Shaashadda Muujinta LED-ka dabacsan
Shaashada muraayadda sagxada LED
Bandhig hufan oo LED ah
Shaashada muraayadda tiirka iftiinka LED
Xalka bandhiga LED
Shaashada LED-ka Gudaha ee Kirada
Ijaarka Banaanka ee LED-ka
Shaashada LED gudaha ee go'an
Shaashadda LED-ka ee Go'an
Shaashadda LED-ka ee Super HD
Shaashada LED dabacsan
Shaashada kubbadda LED
Shaashadda Tiirka Iftiinka LED
Shaashada Boostar LED
Tilmaamaha JYLED Hordhac
Qalab Deg Deg ah & Fudud
Si fudud ugu xidh Shaashadda LED mid ka mid ah qalab kasta oo isla markiiba ku maamul waxa ku jira software-ka LED, iyo kooxdayada xirfadlayaasha ah waxay sidoo kale kaa caawin karaan ka-hortagga fogaanta oo ku bara sida loo sameeyo.
Shaashadaha muraayadaha leh ayaa ah kuwo dabacsan oo wax ku ool ah si ay kaaga caawiyaan inaad xakamayso oo aad muujiso waxa aad rabto, haddii ay tahay shaashad fiidiyoow ah oo tayo sare leh ama sawir qurux badan, kuma adkaan muujinta LED.
Waxay baahin kartaa macluumaad kasta oo xayaysiis ah iyo fiidiyowyada xayaysiisyadu waxay soo jiitaan macaamiisha bartilmaameedka ah waxayna kordhiyaan faa'iidada. Shaashadda LED-ka ee ganacsiga ayaa ah doorashada ugu horreysa ee xayeysiinta shirkadaha si loo gaaro yoolkan.
Isticmaalka qarsoon ma jiro
Laga soo bilaabo wax soo saarka iyada oo loo marayo rakibaadda iyo sidoo kale macaamiisha joogtada ah iyo taageerada farsamada, si fudud u maareyso muraayadaha LED-yada dhijitaalka ah ee qaabkayaga qiimaha fudud oo aan lahayn kharashyo dheeraad ah.
Shaashada LED-ka Kirada ee Dibadda
shaashad bannaan oo go'an
Shaashad Suuqgeynta Dabaqa LED
SHAASHADA SHAASHADDA CIIDKA Ilayska LED
Haddii aad diyaar u tahay inaad hesho gidaarka fiidiyoowga LED-ka, waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno!
Dooro xaaladda codsigaaga
Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladaha codsiga caadiga ah
Shaashada LED-ka ee Kirada
Muujinta 3D LED
Shaashadda Dabaqadda Dabaqadda LED
Bandhiga DJ Bar LED
Sidee loo sameeyaa shaashadda 3D ee hogaaminta?
Sanadihii la soo dhaafay, baahida loo qabo xayaysiisyada dibadda ayaa sii waday inay korodho, iyo tignoolajiyada bannaanka ee muraayadaha waaweyn ee LED-ka ayaa sii waday inay koraan. Gaar ahaan, muuqaalka joogtada ah ee shaashadda 3D LED.
Muqaal Fiican oo LED ah VS mini LED bandhig VS micro LED
2020 wuxuu noqon doonaa sanadka ugu horeeya ee soo bandhigida micro LED. Waxaa la sheegay in warshadda ay maalgelisay Apple ay sidoo kale siin doonto bandhigyo micro LED ah oo loogu talagalay Apple Watch sanadka 2023: kan dambe wuxuu yeelan doonaa faa'iidooyin waaweyn sida dhalaal sare.
Sida loo ururiyo module LED sanduuqa LED
Waxaa jira macaamiil badan oo leh awood xoog leh oo gacan-qabsi ah, kuwaas oo xiiseynaya sida moduleka LED-ka la isugu keenay? Waxaan rabaa in aan barto oo aan keligay isku keeno. Kadib waxaan ka bilaabi doonaa kala soocida sanduuqa
Waa maxay shaashadda cilladda LED-ka? Waa maxay noocyada jira?
Ma jiraa shaashad hufan oo dhamaystiran P3.91 LED?
Waa maxay hababka rakibaadda ee P2.976 bandhigay LED hufan?
Nadiifin yar oo LED VS Mini LED ah
Muqaalkee ayaa u fiican indhaha?
LED ama OLED miyaa ka fiican?
Immisa ayay ku kacaysaa shaashadda LED-ka?
Waa imisa qiimaha darbiga LED-ka?
LED miyay ka fiican tahay LCD?
LED muuqaal garoon yar oo VS LCD kala qaybinta shaashadda
iftiinka muraayadda LED Bandhiga LED' bandhig LED dabacsan Qiimaha bandhiga LED dabacsan Muujinta LED HD dooro muraayad yar oo gudaha ah JYLED BILAASH LED Soosaarayaasha bandhiga LED Nooca bandhiga LED Muujinta elektarooniga ah ee LED Shaashada dabacsan ee LED Muujinta foornada dabaqa LED Shaashada sagxadda sagxadda LED Shaashad sagxadda dhulka garaadka leh ee LED Shaashada tiirka iftiinka LED Qaybaha LED Muujinta kirada LED Shaashada cirka ee LED LED muraayad yar oo muuqaal ah muraayadaha wareegsan ee hogaaminaya Shaashada hagida taraafikada LED Shaashad hufan oo LED ah Meta-universe LED bandhigay Isha qaawan ee 3D LED bannaanka LED dibadda LED screen weyn hagaajin muraayadda LED-ka ee jabtay muraayad yar oo LED ah muraayad yar oo LED ah darbiga asalka kirada marxaladda Bandhiga LED-ka ee xayeysiiska 10ka shirkadood ee ugu sareeya ee soo bandhiga LED tobanka sare ee LED dispaly brand Tobanka ugu sarreeya shirkadda bandhiga LED Bandhig LED oo hufan noocyada bandhigyada LED dabacsan daaqada LED screen hufan
Kaniisadda 4K HD bandhig LED
P3.91 Ijaarka Gudaha ee LED-ka
Shaashad muuqaal ah oo gudaha ah P5
P1.667 gudaha LED muuqaal sare ah
Muuqaalka Fine Pixel Pitch LED
Waxaan nahay soo-saare xirfad leh oo ah P2, p2.5 Fine-Pitch bandhigay, P3, P4, p4.81, P5, P6, P8, P10 muuqaal HD-midab buuxa leh, taxane kiro heersare ah oo LED ah oo muujinaya bandhigyo LED gudaha ah, iyo taxane bannaanka Muujinta LED, oo ku siinaya tayo sare, qeexid sare, alaab tayo leh oo LED ah.
Waqtigan xaadirka ah, LED-ga ugu weyn ee shirkadda LED-soo-saarka muraayadda-muujinta-midabka-buuxda, bandhigyada taxanaha gudaha ee LED-ka, bandhigyada taxanaha LED-ka, bandhiga taxanaha kiraynta LED-ka, muraayadda dabaqa ee is-dhexgalka LED-ka, shaashadda hufan, iwm. JYLED waxay leedahay faa'iidooyinka tayada xasilloon, cad. sawir, midab midab leh, tamarta badbaadinta, adeeg nolol dheer, iyo qiimo jaban.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah, fadlan la xidhiidh maamulaha adeegga macaamiisha: + 86-13553831871
Muujinta Foornada Dabaqa ee LED
Dibad-baxa weyn ee LED
Muuqaalka Ijaarka ee Marxaladda
No.2505, Songbai Road, Shiyan, Degmada Baoan, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha
Iibiyaha Bandhiga LED
Iibso Shaashada Led
Muqaal Ledh Gudaha ah
Xuquuqda daabacaadda 2010-2021 SHENZHEN JYLED Technology CO., Ltd.